ठुला कार्यक्रम, भोज भत्तेर नगर्न तेमाल गाउँपालिकाको निर्देशन, एस्.ई.ई. परिक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राखिने – Radio Roshi
ठुला कार्यक्रम, भोज भत्तेर नगर्न तेमाल गाउँपालिकाको निर्देशन, एस्.ई.ई. परिक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राखिने
in रोशी खबर / शिक्षा / स्थानीय तह / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	March 15, 2020
यश कुमार परियार/ चैत्र २,
तेमाल गाउँपालिकाले ठुला सभा सम्मेलन, भोज भत्तेर, धेरै मानिस जमघट हुने कार्यक्रमहरु नगर्न निर्देशन दिएको छ । आज गाउँपालिका अध्यक्ष सलाम सिं तामाङको अध्यक्षतामा बसेको ३४ औँ कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञान बहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् । कोरोनाको संक्रमण फैलनबाट आवश्यक सतर्कता अपनाउनका निमित्त यस्तो निर्णय गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताए ।
त्यस्तै बैठकले नजिकिँदै गरेको कक्षा १० को एस्.ई.ई. परिक्षा केन्द्र वडा नं ६ मा रहेको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यहि चैत्र ६ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १० को परिक्षालाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थिहरुमा डर रहित बनाउने र कुनै समस्या परेमा उपचार गराउनका लागी हेल्थ डेस्क स्थापना गरिने उनले बताए ।
त्यस्तै पालिकामा भएका विद्यालयहरुलाई सेनिटाईजर, साबुन लगायत आवश्यक सामग्री र स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिए । सरकारले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । तेमाल गाउँपालिकाले पनि आफ्नो वडाहरुमा विभिन्न जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्ने, कोरोना सम्बन्धि सुचनाहरु प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य कर्मिहरु टोलटोलमा परिचालन गर्ने प्रवक्ता तामाङले बताए ।